Guumaysiga Isra’iil oo maalintii labaad oo xidhiidh ah si buuxda u xidhay Masjidka Al-Aqsa - Horn Future
Guumaysiga Isra’iil oo maalintii labaad oo xidhiidh ah si buuxda u xidhay Masjidka Al-Aqsa
Qudus (Horn Future)-Waxa maalintii labaad oo xidhiidh ah si buuxda ciidamada guumeeysiga Isra’iil ay u sii wadaan xidhitaanka Masjidka Al-Aqsa ee bariga magaaladda baraykanka ee Qudus.
Tallaabadan guumeeysiga ayaa ah mid uu kaga hortaggayo in lagu tukado salaadda iyada oo sido kale mamnuucay in eedaanka kor looga qaado minaaradaha,halka ay u diideen inay oggolaadaan in dadku ay cibaadaysanaya iyaga oo sido kale ka hor joogsaday inuu soo galo Imamka masjidkan.
Waxa sido kale guumeeysiga Isra’iil uu kusoo rogay go’doomin adag qaybta bari ee magaaladda Qudus halkaas oo uu kuyaalo Masjidka Al-Aqsa,si looga hortagga Falastiiniyiinta aanan deggaanka ku ahayn inay soo galaan magaaladdan.
War qoraal ah oo uu soo saaray Sheekh Sabri Cikrama oo ah wacdiyaha Masjidka Al-Aqsa oo u gudbiyay warbaahinta caalamka ayaa waxa uu ku yidhi “Waxa maalintii labaad oo xidhiidh ah Isra’iil ay ka hor joogsatay in lagu tukado Salaadda Masaajidka Al-Aqsa,waxana ay joojisay in kor looga qaado eedaanka minaaradaha,iyada oo sido kale joojisay inay soo galaan Imaamyada iyo Waacdiyayaashu masaajidkan,”.
Waxa sheekhu intaa uu raaciyaya oo uu yidhi”Tallaabadan waa mid aanan hore loo arag tan iyo markii Isra’iil ay xooga ku qabsatay magaalada Qudus sanadkii 1967,waanan diidnay talaabooyinkan Isra’iil,waxana aan ku baaqaynaa inay si degdeg ah uga noqoto,”.
Boqolaal katirsan ciidamada guumeeysiga Isra’iil ayaa lagu faafiyay hilinada laga soo galo qaybtii hore ee magaaladda Qudus,halkaas oo ay ka tagaan jid-gooyo biro ah oo ay kaga hortaggayaan muwaadiniinta si aynan ugu soo dhawaanin iridaha si ay usoo galaan magaaladdan.
Ciidamada guumeeysiga Isra’iil ayaa tan iyo subaxdii Jimcaha xidhay Masjidka Al-Aqsa,iyaga oo xoog kaga saaray dhammaan dadkii ku sugnaa ee ku cibaadaysanayay,waxana tan iyo markaas loo diiday in loo oggolaado inay soo galaan maamulka Islaamiga Waqfiga ee Qudus.
Tallaabadan uu ku kacay guumeeysiga Isra’iil ayaa waxay ka dambeeysay fal rasaasayn ah oo lagu toogtay 3 Falastiiniyiin ah oo ku shahiiday isla goobta iyo dilka 2 xubnood oo ka mid ah booliiska guumeeysiga Isra’iil.
« Sarkaal Russian oo ka qayb galay kulankii dhexmaray wiilka Trump iyo qareenada Russia	» Erdogan”Madaxda galbeedku ha kala doortaan inay ixtiraamaan Turkey ama argagixisada”